Lupus anticoagulant - yeka ukuthi kuyingozi kanjani
On igazi ekunqandeni okungenzeka bahlukunyezwe imingcele eminingi, okuyinto kunqunywa ukuhlaziywa kwamakhemikhali kwegazi nokutadisha coagulation, kodwa noma kunjalo kubalulekile ukukhumbula ukuthi zonke izinkomba kufanele ahlaziye udokotela bathembele kuleli cala kuphela ukuhlola omunye inkomba, futhi imiphumela Ucwaningo olunzulu. Kwezinye izimo, igazi coagulation futhi anticoagulation simiso kokuhlaziywa has ukwenza ukuhlolwa immunological, isibonelo, ukuba unikele ngegazi ukuze amasosha cardiolipin futhi lupus anticoagulant.
Kuyini i-lupus anticoagulant kanye nekubaluleka kwalo emzimbeni womuntu
Ngaphansi kwezimo ezivamile, igazi coagulation futhi anticoagulation izinhlelo zilingana, - flowability wegazi lugcinwa ngaleyo ndlela kwakheka imithambo yegazi ngokungabi bikho umonakalo futhi thrombus kumiswa ukulimala amanxeba kunoma iyiphi indawo. Ngakho, lapho lokuhlushwa izinto ezithile serum igazi kumele kunyuke olungaba isinxephezelo kanye nezinye - kuphela kulesi simo kungenzeka thrombosis isixwayiso. Kodwa umzimba womuntu liyakwazi lezi zinguquko kuphela umkhawulo othile, okwathi ngemva kwalokho kuza isikhathi lapho ngisho kwadingeka ukuthambekela thrombosis kungaba ibe imbangela ukopha - izici obhekene egazini ekunqandeni ukopha, nje musa ukuhlala esabelweni sethu njengezithunywa serum. Kuyinto ikhemikhali kungabangela coagulation iziyaluyalu zihlanganisa lupus anticoagulant - isakhi esithile esikhethekile wamaprotheni nemvelo, elingelakwaJuda immunoglobulin womuntu.
Ikhishwa la masosha omzimba kanye namasosha omzimba cardiolipin futhi phospholipids bebonke, kumaseli kwesimiso somzimba sokuzivikela ezifweni, futhi iningi lalezi izinto ezisegazini kubonakele ku ezihlukahlukene nezifo sokuhlasela kwamasosha omzimba. Kodwa inkinga itholakala lokuthi ukuthi lupus anticoagulant HIV ngesikhathi sokukhulelwa, kungase yimbangela yezinkinga ezihlukahlukene phezu ingxenye okhulelweyo, kusukela i-fetus. Kufanele kuqondwe ukuthi ukuthola i-lupus anticoagulant ngokungabi bikho amasosha DNA ezahlukene nesineke, phospholipids, cardiolipin ukukhuluma kuphela kungenzeka yale miphumela engemihle futhi isidingo ebhekiwe yezokwelapha isiguli.
Kumele kukhunjulwe ukuthi anticoagulant lupus, okuyinto kuyinto evamile nge igazi serum amabanga kusuka 0.8 kuya 1.2 amayunithi kabi amandla akhe, akuyona ngokwanele inkomba okuthembekile. Ngakho-ke, lo ukuthola of amazinga ephakeme noma yi cwaningo ngabazeka kuyadingeka ukwenza eziyinkimbinkimbi nge coagulation kumelwe ichaze D-dimer, coagulation isikhathi (APTT), futhi mhlawumbe inani elikhulu izinkomba ukutadisha - incike lesi sibikezelo, futhi amaqhinga ukwelashwa kunokwenzeka yesiguli sami esithile.
Lupus anticoagulant - lapho ucwaningo luyadingeka
Ngaso leso sikhathi ukuhlolwa igazi lupus anticoagulant kungadingeka hhayi kuphela kwabesifazane abakhulelwe. Lokhu kuhlaziya wenziwa kanye ezigulini ngaphambi yobudala engu-40 uvele lwemithambo futhi thrombosis emithambo yegazi kwanoma iyiphi indawo, thromboembolism, oluhambisana okungazelelwe noma unhlangothi ischemic ngaphandle kobukhona lezo zifo lapho ingaqala kwegazi cerebral (unomfutho wegazi ophakeme, kunikezelwe cardio atherosclerotic). Ikakhulukazi Kuyaphawuleka kukhona abesifazane abasha, ngubani esikhathini esithile ekuphileni kwabo kuye kwaba namacala ngokufa okuzumayo umbungu kunoma yisiphi isigaba sokukhulelwa ngokungabi bikho nezifo ngenxa yezakhi zofuzo futhi ukutheleleka fetus. Kuphela nokuqapha njalo coagulation imingcele, coagulate lupus, amasosha omzimba phospholipids futhi cardiolipin Ungakhetha ukwelashwa okuphumelelayo - kuphela kulesi simo kungenzeka ukuvimbela ukuqhubeka iziyaluyalu ukopha.
Kuthiwa ama-hormone of nezindlala ngokobulili. Ama-hormone ekhiqizwa gonads
Indlela ukuqeda elula izimpawu? Ngempumelelo amakhambi abantu
Ficus benjamina - udumo, ngenxa ubuhle
Ballasts Electronic - kuyini? Izibani ballasts electronic: ukubuyekezwa, intengo
"Celestoderm" nge garamitsinom. Medicine "Celestoderm-in." Yokusetshenziswa
Ukuthuthukiswa kwengane engaphansi konyaka owodwa ubudala?